Barnaamijka Cilmi-baarista Ruushka ee Mas'uuliyadiisu Milyan Malyan oo kamid ah "Pharmacy Canadian Canadian" Spam Emails
Igor Artimovich boqolaal kun oo kombiyuutarro ah ayaa dunida oo dhan ku dhuftay barnaamijka botnet ee loo yaqaan Festi. Waxa uu u jeestay qalabka kombiyuutarka oo ku dhexjiray server-yada loo yaqaan 'spaming spaming'. Alexander Peresunko, oo ah khabiir hormuud u ah Semt , ayaa sheegay in kiiskiisa iyo maxkamadiisu ay gacan ka geysteen aqoonsiga Ruushka qaawan ee qarsoodiga ah ee isku xiraya spam server, shirkadaha dawooyinka been abuurka ah iyo khatarta aqoonsiga
Xayeysiisyada farmashiyaha oo dhan oo si joogta ah ugu muuqda sanduuqaaga emailkaagu wuxuu eegayaa sharci ahaan iyo asal ah. Si kastaba ha ahaatee, dhageysiyada maxkamad ee dhawaan iyo kiiska Igor ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqooyin naxdin leh. Sida laga soo xigtay New York Times, spam waxay ka dalbadeen farmasiyada Canada waxayna ku xidhnayd daroogada sharci darada ah ee Ruushka iyo Kanada - real drivers licence for sale. Waxay ka faa'iideysatay nabadgelyada shabakada dalxiiska iyo adeegsiga macaamilka si loo qaybiyo khatarta khatarta ah ee tayada liidata ee macaamiisha aan doonaynin adduunka oo dhan.
Kumbuyuutarro fayruuska ah iyo nadaafad-ku-qaadiddu waxay awood u leeyihiin in ay abuuraan malaayiin bilyan oo spam emails ah oo been abuur ah, iyo in badan oo emails ah ayaa loo diraa macaamiisha maalin kasta. Hawlgabka Pangea VI, wiiggii caanka ahaa ee ay fulinaysay fulinta sharciga, ayaa isku dayey in ay xirto bogagga bogagga farmashiyaha ee internetka. Ugu dambeyntii, Hawlgalkii Pangea VI ayaa tirtiray tiro badan oo ka mid ah URL-yada la xidhiidha weerarrada spam, FDA ayaana ahayd kowaad oo kiiska soo wargelisa..Baadhitaan deg-deg ah ee sanduuqaaga ku yaal ayaa tusi kara sida bogagahaani ay dib ugu bilaabi lahaayeen waxqabadka spamka ee internetka.
Khatarta ay leedahay macaamiisha ay soo bandhigtay xayeysiisyada farmashiyaha beenta ah waa kuwo badan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan waa in website-yadaasi ay iibiyaan mukhaadaraad oo aysan jirin wax daawo ah oo ay ku xadgudbaan xeerarka FDA iyo sidoo kale sharciyada Federaalka. Warbixinta FDA iyo Allspammedup.com ayaa sheegaya in macaamiisha iibsanaya mukhaadaraadka laga soo iibsado farmasiyada been abuurka ah ee la xayeysiinayo waxay ku xiran tahay kaarka deynta, macluumaadka shakhsiyeed iyo lambarrada kaararka deynta. Intaa waxaa dheer, in kombiyuutaradooda iyo qalabka mobile-ka ay hoos u dhaceen oo si joogta ah u diraan emaylka spam ee dad badan oo isticmaala internetka. Xitaa xidhiidhada internetka ee macaamiisha waxay ku xiran yihiin waxyaabo naceyb ah iyo fayrasyo, iyo nidaamkoodu waxay ku dhaceen inta badan.
FDA waxay uga digtay macaamiisha inay ku dukaameystaan ​​dukaamada farmasiyada oo been abuur ah waxayna doonayaan in qof kasta uu ku badbaado internetka. Dambiilayaal badan iyo in ka badan ayaa lacag ka qaadaya macaamiisha kuwaas oo isticmaala bogagga xaasidnimada ah si ay u iibsadaan mukhaadaraadka iyo alaabta ay ugu jecel yihiin. Ku dhowaad dhammaanba shabakadahaas oo kale ayaa la kulmay wakaaladda sharci fulinta Federaalka iyo wakiillada FDA. Wakiilada beenta ah ee farmasiyada ama dabeecadaha internetka ah ayaa wacaya dhibbanayaasha, iyaga oo ku wargalinaya nooca daawooyinkooda. Dhammaan wicitaanada telefoonada oo kale waa sharci darro, hay'adaha sharci-fulinta ee loo yaqaan 'law enforcement agencies' ayaa isku dayaya inay soo rogaan ganaax dhan $ 20,000. Dhibbanayaasha waxaa la weydiistaa inay bixiyaan ganaaxa ka hor inta aan daawooyinkooda la geeyn guryahooda. Inta badan waxay leeyihiin macaamilo khayaano ah oo laga soo horjeedo kaararka deynta iyo kaararka deynta. Way fududahay macaamiisha in ay ka ilaaliyaan dukaamada been abuurka ah. Waa in aysan marnaba la wadaagin macluumaadka shakhsi ahaaneed qof walba oo internetka ah. Waxaa intaa dheer, waa inay bartaan sida loo kaydiyo lacagta oo looga ilaaliyo daawooyinka been abuurka ah iyo sidoo kale dembiilayaasha iibiya mukhadaraadka sharci darrada ah ee internetka ah